Root Palmitoylethanolamide Powder (544-31-0) Soosaarayaal - Phcoker
Budada Raw Palmitoylethanolamide (PEA) waa amide acid fido leh, oo ka tirsan fasalka …… ..
Qalabka Root Palmitoylethanolamide (544-31-0) video
Xashiishka Palmitoylethanolamide budada (544-31-0) Smamnuucista
Product Name Dareemaha budada ah ee Palermo
Magaca Kiimikada Root Palmitoylethanolamide budada;
Fasalka Daroogada Amines, Daawooyinka, Dhexdhexaadinta & Kiimikooyinka Fiican
Molecular Wsideed 299.499 g / mol
barafku Psaliid 93 ilaa 98 ° C (199 ilaa 208 ° F; 366 ilaa 371 K)
dhibic kulayl 461.5 ° C at 760 mmHg
Biological Life-Life Macluumaadka Looma Helan
Color White to White-White Solid
SOlubility Chloroform (Si xariif ah), Methanol (Wareeysi)
Root Palmitoylethanolamide budada Application Budada Palermo-ochanolamide budada waa CB2 cannabinoid receptor agonist iyo agonist xulashada GPR55.
Macmacaanka Rummaanaha Palmitoylethanolamide (544-31-0) Sharaxaad
Budada dufanka Palmasoylethanolamide (PEA) waa amid dufan ah oo dufan leh, oo ka tirsan fasalka nukliyeerka nukliyeerka. Palmitoylethanolamide (PEA) waxaa laga sameeyaa jirka si loola dagaalamo xanuunka iyo bararka. Xayawaanka iyo dhirta badankood waxay kaloo soo saaraan PEA. Xaddiga ugu sareeya waxaa laga heli karaa sicirta soy, soodhaha, ukunta digaaga, lawska, iyo alfalfa. Dufankaani wuxuu si ammaan ah u kordhin karaa cannabino dabiiciga ah iyo ilaalinta dareemayaasha jirkaada oo dhan. Faa'iidooyinka waxay ku dhiirri-galinayaan noocyo badan oo ka mid ah dhibaatooyinka la-daweynayo.
Palmitoylethanolamide waxaa loo soo bandhigay inuu ku xirnaado soo-dhoweeyaha unug-nukleus (soo-qaadaha nukliyeerka) wuxuuna sameeyaa howlo badan oo bayooloji ah oo la xiriira xanuun joogto ah iyo caabuq. Bartilmaameedka ugu weyn waxaa loo maleynayaa inuu yahay alfa-qabate-kiciyaha firfircoon ee firfircoon ee peroxisome (PPAR-α). Si kastaba ha noqotee, joogitaanka Palmitoylethanolamide (iyo qaab-dhismeedka kale ee la xiriira N-acylethanolamines) ayaa lagu yaqaanay inay xoojiso waxqabadka anandamide iyadoo loogu yeero "saamayn ku xeeran". Root Palmitoylethanolamide budada / PEA ayaa lagu muujiyay inay leedahay anti-bararka, anti-nociceptive, neuroprotective, iyo guryaha lidka ku ah.
Dheecaan ahaan, PEA waxaa laga helaa kiniin, kaabis, iyo foomka budada. Talyaaniga iyo Isbaanishka, PEA waa suuq gashaa ujeedo caafimaad oo gaar ah.
Budada Palmitoylethanolamide (544-31-0) Mashruuca Hawlaha
Palmitoylethanolamide waxay hawlgelisaa tamarta-kor u qaadista, baruurta, iyo alfa-bararka anti-bararka. Iyadoo la adeegsanayo borotiinka muhiimka ah, PEA waxay joojineysaa waxqabadka hiddo-baraha iyo wax soo saarka walxaha badan ee inflammatory ah.
Palmitoylethanolamide wuxuu yareeyaa waxqabadka booga nuujinta ee FAAH taasoo burburisa dabiiciga cannabinoid anandamide. Tani waxay kordhisaa heerarka xasaasiyad anandamide ee jirkaaga, ka caawinta inaad ka hortagto xanuunka iyo kordhinta nasashada. Waxa kale oo ay dhaqaajin kartaa dukaamada cannabinoid (CB2 iyo CB1).
Palmitoylethanolamide wuxuu ka kooban yahay palmitic acid qaabkeeda. Goobta bilowga ah ee samaynta PEA ee jirka waa mid gebi ahaanba dufan leh.
Si kastaba ha noqotee, inaad si fudud u kordhiso qaadashada Palmitic acid ama dufanka kale ee cuntadu saameyn kuma yeelan doonto wax soo saarka Palmitoylethanolamide ee jirka. Tani waa sababta oo ah jirkaaga wuxuu isticmaali doonaa PEA kaliya marka uu u baahan yahay inuu magdhabo caabuqa ama xanuunka, heerarkiisuna sidoo kale caadi ahaan way kala duwanaan doonaan maalinta oo dhan. Habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo waxtarka PEA waa kaabis la isku dheellitiray, ama cunnooyinka ay ku badan tahay PEA.
Isticmaal ee budada Palmitoylethanolamide (544-31-0)
Management Maareynta xanuunka
▪ Kahortaga nociceptive
Properties Guryaha ka-hortagga walxaha jirka.
Daawada Palmitoylethanolamide budada (544-31-0)
Daraasado badan oo caafimaad ayaa faa'iido leh laakiin weli waxaa jira xog ku filan oo sheegaya in Palmitoylethanolamide ay tahay mid si khaas ah loo ilaaliyo. Xitaa xitaa wakhtiga dheeraadka ah ee PEA ma aha mid ku xiran wax kasta oo saameyn xun. Palmitoylethanolamide waxaa loo isticmaalaa qiyaasta x mgka 300 illaa 1.8 g / maalin ee daraasadaha kiliinikada.
Ugu yaraan 600 mg / maalin ayaa laga yaabaa in loo baahdo si loo yareeyo xanuunka neerfaha, halka qiyaasta 1.2 g / maalin loo isticmaalay xanuunka dareemaha macaanka.
▪ PEA ilaa 1.8 g / maalin ayaa loo isticmaalay yareynta dhaawaca dareemayaasha indhaha ee dadka qaba glaucoma ama sonkorow.
Fighting La dagaallanka hargabka caadiga ah, 1.2 g / maalin ayaa ahayd qiyaasta caadiga ah.
Wadarta qadarka waxaa loo kala qaybin karaa laba maalintii. Waxaan kugula talineynaa inaad ka bilowdo qiyaasta caadiga ah ee 1.2 g / maalin oo loo qaybiyay 600 mg subaxdii iyo 600 mg galabtii. Lasoco jawaabtaada oo si tartiib tartiib ah u kordhi qiyaasta ka dib 1 bil haddii loo baahdo.
Daawooyinka dheeraadka ah ee Palmitoylethanolamide ayaa loo adeegsaday badi daraasadaha ayaa ka sarreeya qaababka kale. Palermonized Palmitoylethanolamide waa budo ganaax ah oo si fiican loo nuugo oo waxtar badan. Palmitoylethanolamide oo lagu daray luteolin ayaa sidoo kale loo isticmaalaa tijaabooyinka bukaan-socodka waxaana laga faa'iideysan doonaa caafimaadka maskaxda.
Faa'iidooyinka Budada Palmitoylethanolamide (544-31-0)
Tan iyo markii la helay 1950-meeyadii, cilmi baarayaashu waxay aad ula dhacsanaayeen Palmitoylethanolamide. Maaddaama xanuun baabi'iye dabiici ah oo xoog leh oo ammaan ah iyo anti-bararka, Palmitoylethanolamide waxay rajo u qabtaa dad badan oo qaba xanuun dabadheeraad ah iyo neeropathic. Marka laga reebo faa iidadan, budada Palmitoylethanolamide ayaa laga yaabaa inay ku siiso waxtar faa'iido u leh caafimaadkaaga shakhsi ahaaneed. Waxaa jira faa iidooyin tixraac ah:
♦ PEA Waxay Yareysaa Xanuunka iyo Caabuqa
♦ Waxay sare u qaadaa caafimaadka Maskaxda iyo soo noolaynta
♦ U Fiican Indhahaaga
♦ Waxaa laga yaabaa inuu ilaaliyo Qalbigaaga
Edu Wuxuu Yareeyaa Caabuqa Gut
♦ Waxaa laga yaabaa inuu Yareeyo Astaamaha Murugada.
Wuxuu yareeyaa astaamaha cudurka loo yaqaan 'Sclerosis Multiple'
Fight Waxaa laga yaabaa inuu la dagaallamo Qabowga Guud
♦ Waxay yareysaa sii deynta histamine
Faa'iidooyinka cusub ee Palmitoylethanolamide ayaa wali la sii ogaanayaa, taas oo ka dhigeysa in saynisyahannada qaarkood ay wareersan yihiin. Waxay soo baxday in Palmitoylethanolamide ay sidoo kale dhaqaajin karto soo-dhoweeyeyaasha cannabinoid, hagaajinta niyadda, yareynta xasaasiyadda.
Maxey yihiin xaqiiqooyinka Palmitoylethanolamide (PEA) ee leh faa'iidooyinka miisaan lumis?